Ikhabhinethi yeBlue Moose- esecaleni kwechibi kunye ne-20min ukuya kwiiCastles ze-Ice
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKristin
Balekela kuxolo lwe-NH's White Mountains.
Ikhaya lethu elipholileyo lekhabhinethi yelog lilala i-10 enamagumbi okulala ama-4 + indawo yokulala / yokudlala indawo ephezulu kunye negumbi lokuhlambela eli-2. Ikhabhinethi ibekwe phambi kwechibi kwindawo yaseMountain Lakes kumda osentshona weHlathi leSizwe leNtaba iWhite ukusuka kuhola wendlela iKancamagus.
Yonwabela iimbono zechibi elinomkhenkce kunye nokugonwa kwindawo yethu yegesi yangaphakathi. Yiza nezileyi, izityibilizi zomkhenkce, okanye izihlangu zekhephu ukuze ujonge indawo ye-Mountain Lakes. Imizuzu engama-30 inye ukuya eCannon okanye eLoon ukutyibilika ekhephini okanye imizuzu engama-20 ukuya kwiinqaba zomkhenkce zeNH!
Ikhabhinethi yethu inegumbi lokuhlala / lokutyela elivulekileyo elinendawo yomlilo yegesi kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukho amagumbi amabini okulala abucala kunye negumbi lokuhlambela kulo mgangatho. Indawo yokuhlala ephambili iphumela kwindawo ebanzi ejonge echibini. Idesika ixhotyiswe ngendawo yokutyela ye-8 kunye ne-propane grill.
Ukusuka kweyona ndawo iphambili yokuhlala, kukho izinyuko ukuya kwindawo ephezulu ebandakanya iibhedi ezimbini kunye nendawo yokuzonwabisa, kubandakanya i-foosball / itafile encinci yephuli. **Nceda uqaphele ukuba ukukhwela kwiintsimbi kuthintelwe ngokungqongqo, kwaye abantwana abancinci kufuneka babekwe esweni ngelixa bekwindawo ephezulu.**
Umgangatho ongezantsi wekhabhathi yindawo engaphantsi egqityiweyo ebandakanya igumbi leTV elipholileyo, amagumbi amabini abucala, igumbi lokuhlambela, kunye nempahla. Eli nqanaba liphuma lisiya ngasemva kwendlu kunye nechibi.
Sinikezela ngezitulo ukonwabela i-firepit. Kukho iikayak ezimbini ezingatshatanga kunye nesikhephe sokubhexa (esinyotywa njengebhayisekile) kwindawo yokuhlola ichibi.
Igumbi elininzi elingasemva kwendlu yokujikeleza, kwithambeka elithe chu ukuya echibini. Ungaqubha ngqo ukusuka ngasemva okanye kwenye yeelwandle zaseMountain Lakes.
Sikwindawo yolonwabo yamaxesha amane eMountain Lakes, kwaye ikhabhathi yethu isecaleni kwechibi kwi-Upper Mountain Lake. Kukho amachibi amabini okuqubha, ukukhwela inqanawa okanye ukukhwela iphenyane (izikhephe ezingezizo iimoto kuphela), ukuloba, okanye ukutyibiliza emkhenkceni. Amachibi ngawabucala, ngoko ke akukho layisenisi karhulumente ifunekayo ekulobeni. Indawo yethu iphambi kwechibi, okanye ungonwabela enye yeelwandle zoluntu. Kukwakho nephuli, inkundla yebhola yomnyazi, ibala lentenetya, ibala lokudlala, ibala lebaseball, ibala langaphandle lokutyibiliza emkhenkceni kunye nenduli yokutyibiliza phakathi kweMountain Lakes.
Ikhabhinethi yethu kukuhamba ngemizuzu eli-10 ukuya edolophini yaseWoodsville, enegrosari yokuthenga (iWalmart neShaw's) kunye neendawo zokutyela zasekhaya. Sikwafumene i-Hatchland's Creamery emnandi yeyona ice cream yemaple ibalaseleyo!
Kwimizuzu engama-40 yokuqhuba, uya kufumana:
-I-Lost River Gorge kunye nemiqolomba (imizuzu engama-20)
- Iinqaba zomkhenkce (imizuzu engama-20)
-Ukutyibilika eCannon okanye kwiNtaba yeLoon
-Iivenkile eWoodstock, eLincoln, naseLittleton
-Iziko lokuthengisa ngobuqhetseba (Rek-Lis, Iron Furnace, Schilling)
-Isithuba soRhwebo sikaClark
-I-Franconia Notch State Park (I-Flume, i-Basin, indoda endala yeNdawo yeMbali yeNtaba, i-Echo Lake)
-Iindlela ezahlukeneyo zokuhamba intaba, amachibi, kunye nemisinga kuzo zonke iiNtaba eziMhlophe
-Kancamagus scenic drive kunye nokubonwa kwe-moose
- Collins corn maze (ekwindla)
- 15 imizuzu ukuya kumda VT
- Iifama zengingqi
-Kuninzi kakhulu ukuphonononga!
(qaphela ukuba ugcino luyafuneka kwiindawo ezininzi ezinomtsalane - cwangcisa kwangaphambili kwaye ubhukishe kwangaphambi kokuba uhlale!)
Umbuki zindwendwe ngu- Kristin
Hello! I enjoy adventures with my husband and two young kids. Sometimes we travel with our dog Penny, a papillon Chihuahua mix.
Iindwendwe ziya kuzihlola ngokwazo ngokutshixa nge-elektroniki.
Ababuki zindwendwe abahlali kule ndawo, kodwa bafumaneka ngemiyalezo ye-AirBnB ukunceda iindwendwe ekonwabeni kwazo.
Sikwanazo nezibonelelo zasekuhlaleni esinokuqhagamshelana nazo ukuba kukho imeko engxamisekileyo.
Ababuki zindwendwe abahlali kule ndawo, kodwa bafumaneka ngemiyalezo ye-AirBnB ukunceda iindwendwe ekonwa…